मलेसियामा ठगिँदै नेपाली कामदार (Nepali) – MIGRATION & LABOR: Panos South Asia Blog on Migrant Labor
मलेसियामा ठगिँदै नेपाली कामदार (Nepali)
क्वालालम्पुरको जलान अम्पाङस्थित नेपाली दूतावासमा हतास मुद्रामा भेटिए, रोशन भट्ट । रावाङको एक कागजे झोला बनाउने कम्पनीमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत उनी पछिल्ला दुई वर्षयता भने गैरकानुनी कामदारको हैसियतमा थिए । काठमाडौं बसुन्धरास्थित घरबाट बिरामी आमाले बारम्बार बोलाएपछि उनले मन थाम्न सकेनन् । त्यसैले फर्कन हतारिएका थिए । तर गैरकानुनी हैसियतमा भएकै कारण उनलाई घर फर्किन महँगो परिरहेको थियो । २६ सय रिंगिट अर्थात् नेपाली ६५ हजार नेपाली रुपैयाँ ‘दलाल’ को हातमा सुम्पेर घर फर्कने मेलोमेसो मिलाउँदै थिए उनी । भट्टले तिरेको पैसा ‘आवश्यक’ रकमभन्दा एक तिहाइले बढी हो ।
हारफासेले सेवा सुरु गर्नुअघि दूतावासले मलेसियाको एक सामाजिक संस्था ‘कोअपरासी इमिग्रेसन’ लाई गैरकानुनी कामदार पठाउने जिम्मा दिएको थियो । कोअपरासीले प्रतिकामदार १ हजार २ सय ८० रिंगिट शुल्क लिएर कामदार घर पठाउँथ्यो । त्यसलाई लिएर दूतावासविरुद्ध नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि र उक्त संस्थाले आफूखुसी शुल्क बढाएर १ हजार ६ सय ८० रिंगिट पुर्‍यायो । त्यसपछि कोअपरासीसँग दूतावासको सम्झौता तोडियो । त्यसलगत्तै मलेसियाको गृह मन्त्रालयले हारफासेलाई नेपाल, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र भियतनामका गैरकानुनी कामदारको घरफिर्ती प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने जिम्मा दियो । त्यसयता घरफिर्ती प्रक्रिया महँगो मात्रै भएन, दलालको संलग्नता पनि हवात्तै बढ्यो । ‘दलाल’को तहगत ठगीमा पर्नु मलेसियाका गैरकानुनी नेपाली कामदारका निम्ति नौलो होइन ।
त्यसो त भट्टजस्ता अधिकांश कामदार राजधानी क्वालालम्पुर आउनुअघि नै दलालको पासोमा परिसकेका हुन्छन् । फोनमार्फत दलालसँग जोडिएका कामदार उनीहरूले भनेजति पैसा तिर्न र लुरुलुरु पछि लाग्न विवश हुन्छन् । भाषाको समस्या, यात्रा असहजता र दूतावासप्रतिको चरम अविश्वासका कारण भट्टजस्ता कामदार दलालको चंगुलमा पर्छन् । कोतराय र जलान आम्पाङको गल्लीपिच्छे नै भेटिने नेपाली ‘दलाल’ को हात नसमाती नेपाल फर्किने सपना पनि देख्न नसक्ने परिस्थितिको उल्झनमा परेका एक पात्र थिए भट्ट ।
गत बिहीबार दूतावासमा भेटिएका भट्ट अन्य दुई नेपालीलाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन साथी बनिदिएर आएका थिए । ती दुई नेपालीलाई दूतावास पुर्‍याइदिने र लाइनमा राखिदिने जिम्मा उनले एक नेपाली दलालबाटै पाएका थिए । त्यही दलालको भर परेर घर जाने आसमा तीन दिनदेखि क्वालालम्पुर बसिरहेका भट्टले भने, ‘आमा छिटो घर आइज भनेर रातदिन रुनुहुन्छ । अहिले त पैसाको के मतलब भयो र जसरी भए पनि घर जान पाए भयो ।’ आपतमा परेका भट्टजस्तै झन्डै ५० नेपाली ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन लाइनमा उभिएका थिए । तिनलाई केही सुकिलामुकिला एजेन्टले कानेखुसी गरेर केही अथ्र्याइरहेका थिए । कान्तिपुरले कुराकानी गरेका अधिकांश कामदारले आफूले दलाललाई २३ सयदेखि २७ सय रिंगिटसम्म बुझाएको बताए ।
के हो हारफासे ?
मलेसियाका गैरकानुनी कामदारलाई घरफिर्तीमा सहजीकरण गर्ने जिम्मा हारफासे नामक कम्पनीले पाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार हारफासेले सम्बन्धित देशका दूतावाससँग समन्वय गरेर कामदार फिर्तीको प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । तर सम्झौतामा भनिएभन्दा फरक हुने गरी हारफासेले नेपाली दूतावासँग कुनै समन्वय नै नगरी एकलौटी रूपमा चर्को सेवाशुल्क असुलिरहेको छ ।
हारफासेले लिने ५ सय ५० रिंगिट अर्थात् करिब १३ हजार २ सय रुपैयाँबाट हुने काम भनेको ट्राभल डकुमेन्ट बनाएका कामदारलाई गाडीमा राखेर मलेसियाको इमिग्रेसन सेन्टर पुर्‍याउने र घरफिर्तीको अनुमति दिलाइदिने मात्रै हो । त्यसो त घरफिर्तीबापत लाग्ने ४ सय रिंगिट शुल्क भने प्रत्येक कामदारले मलेसियाको अध्यागमनमा बुझाउनैपर्छ । अचम्म त के छ भने यतिका धेरै चर्को शुल्क बुझाएका कुनै पनि नेपाली कामदारले हारफासेबाट आधिकारिक रसिद पाउँदैनन् ।
ट्राभल डकुमेन्ट बनाइसकेपछि कामदारले अब के प्रक्रिया थाल्ने भनेर दूतावासका कर्मचारीलाई सोध्यो भने उनीहरूले दिने जवाफ नै छैन । त्यसको कारण हो, हारफासेले कुनै सम्पर्क कार्यालय नै खोलेको छैन र यसबारे दूतावास जानकार छैन । राजदूत बस्न्यात भन्छन्, ‘हारफासेका एजेन्ट छन् भन्नेसम्म सुनेका छौं तर ती को–को हुन् र यसको कार्यालय कहाँ छ हामीलाई जानकारी छैन ।’
त्यसो त दूतावासले अध्यागमन अधिकारीसँगको बैठकमा हारफासेले चर्को शुल्क लिएको कुरा पनि नउठाएका होइनन् । तर नेपाली अधिकारीको कुरा मलेसियाका अध्यागमन अधिकारीहरूले सुन्दैनन् । हारफासेका तोकिएका एजेन्ट वा हारफासेको सेवा प्रदायक कार्यालयबारे दूतावास जानकार नभएकै कारण दलालहरूले सक्रियता देखाउने मौका पाएका छन् ।
आफूलाई हारफासेको आधिकारिक एजेन्ट बताउने नेत्र केसी दूतावासकै छेवैमा फोटोकपी र फोटो स्टुडियो चलाएर बसेका छन् । केही समयअघि कामदार ठगेको लगायत आरोपमा मलेसियन प्रहरीबाट पक्राउ परेर छुटेका केसीले दूतावासको अगलबगलमा करिब एक सयको संख्यामा एजेन्ट सक्रिय रहेको बताए । उनी आफूले प्रतिकामदार २२ सय ६० र २३ सय ६० लिएर घर पठाउने काम गरिरहेको हाकाहाकी बताउँछन् । केसीले आफूले दु:ख पाएका नेपालीको सेवा गरेर र खानेबस्ने तथा यातायात सहितको सबै शुल्क जोडेर त्यति रकम लिएको हिसाब सुनाए । उनले कतिपय अनधिकृत एजेन्टले कामदारसँग चार हजार रिंगिटसम्म असुलेको उल्लेख गर्दै भने, ‘म त कामदारलाई सेवा शुल्कको रसिद नै दिन्छु । तर धेरैजसो एजेन्टले घर पठाउने नाममा चर्को शुल्क असुुल्छन् र यातना दिएर पनि ठग्छन् ।’
दूतावासमा भेटिएका एक गैरकानुनी हैसियतका कामदारले आफू एजेन्टकै भर परेर क्वालालम्पुरदेखि झन्डै चार सय किमि परको जोहोरबारुबाट दूतावास आइपुगेको बताए । ती कामदार नाम पनि थाहा नभएका एक एजेन्टको फोन सम्पर्कको भरमा क्वालालम्पुर आएका थिए र तिनैलाई घर फर्किन भन्दै एकमुष्ट २४ सय रिंगिट बुझाएका थिए । तिनै कामदारबाट प्राप्त मोबाइल नम्बरमा कान्तिपुरकर्मीले पीडित कामदार बनेर फोन गरेपछि झनै धेरै तथ्य पत्ता लाग्यो ।
कोतरायमा पसल चलाएर बसेको बताउने र आफ्नो नाम ज्याङ्गो बताउने ती एजेन्टले २४ सय ५० रिंगिटमै नेपाल पठाउने जिम्मा लिइदिने बताए । तिनले फकाउँदै भने, ‘अरूले २७/२८ सयसम्म लिएका छन् । तपाईंलाई सस्तोमा मिलाएर गरिदिएको ।’ ती एजेन्टले क्वालालम्पुर झरेपछि खानेबस्ने व्यवस्थादेखि फारम भर्ने र हवाई टिकटसम्मको चाँजो मिलाइदिने बताए । कतिसम्म भने ती एजेन्टले कामदारको उपस्थितिबिना नै सबै कागजात दूतावासबाट तयार पारिदिनेसम्मको आश्वासन दिन भ्याए ।
ज्याङ्गो जस्तै एजेन्टको सम्पर्कमा पुगेका निरीह नेपाली कामदार घर जान पाइने आसमा भनेजति रकम बुझाउन बाध्य छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने पनि घर फर्कने नेपालीहरू एजेन्टको पासोमा परेको बारे बेखबर छैनन् । न्यौपाने भन्छन्, ‘कुन कामदार कतिखेर कुन एजेन्टको पासोमा पर्छ पत्ता नै हुन्न ।’ अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार दूतावास वरिपरि घर पठाइदिने बाचा गर्ने एजेन्टको ठूलो समूह परिचालित छ । जसमध्ये अधिकांश नेपाली नै हुन् । उनले क्वालालम्पुरमा कति नेपाली एजेन्टको भूमिकामा छन् भन्नै नसकिने बताए । न्यौपानेले भने, ‘कतिखेर को एजेन्ट बन्छ पत्तो नै हुन्न ।’
नेपाली दूतावास आफ्नो कमजोर भूमिकाका कारण नेपाली कामदार ठगिएको टुलटुलु हेरेर बसिरहेको छ । कतिसम्म भने राजदूत बस्न्यात हारेको स्वरमा भन्छन्, ‘दूतावासले दलालसँग लडेर नसक्ने भयो । हामी आफैं एजेन्टको चंगुलमा पर्‍यौं । सम्हाल्नै सकेनौं ।’
(Originally published in the Kantipur daily, Nepal.)
Stories published 120
Qatar steps up efforts to protect migrant workers’ rights, but activists are not celebrating just yet
ठगिएर गैरकानुनी हुन्छन्, झन् ठगिइन्छन् (Nepali)
निर्बाध मानव तस्करी (Nepali)